အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားဟာအလွန်ရိုးရှင်းသောနိယာမအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ (မတရားသောသူတို့နှင့်အပူလျှပ်ကာ) ရှိပြီးအရာ, (အထူးယက်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူအများအားဖြင့်ဒြပ်) အထူးထည်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသဘာဝကျကျအရေပြားနှင့်အတွင်းခံအဝတ်အစားများအကြားလေကြောင်း၏အချို့သောအလွှာတွင်စတင်သည့်အခါထိုကွောငျ့, အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားအငွေ့ပျံအပူကြောင့်စောင့်ရှောက်မထားဘူး။ အလှည့်၌, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်ချွေးတစ်သျှူးများကစုပ်ယူမထားဘူး, ဤစွမ်းအင်နှင့်အပူဆုံးရှုံးမှုကိုတစ်ဦးယောက်ျား၏ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲအသားအရေနှင့်ရေငွေ့ပျံ၏မျက်နှာပြင်မှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပုံမှန်အတိုင်းပိတ်ချောဟာကာကှယျဂုဏ်သတ္တိများထိန်းသိမ်းနေစဉ်ကပြင်ပမှ hypothermia, အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်အကျိုးရလဒ်များမှအထောက်အကူပြုအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူ။
မရေမတွက်နိုင်သောအပူအတွင်းခံအဝတ်အစားများ၏အားသာချက်များ, ဒါကြောင့်မိမိအလူကြိုက်များဒါကြီးမြင့်သောအံ့ဩစရာမရှိ။ ဒီထုတ်ကုန်၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးဆိုက် http://priceok.ru/termobele/cid9723 စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်ပေါ်တွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်သင်အကြိုက်ဆုံးမော်ဒယ်ပေါ်စျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်။
သငျသညျအပူအတွင်းခံအဝတ်အစားများရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကိုသိသင့်သနည်း
အဝတ်အစားများတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းရှိတယ်ရာများအတွက်ပထမဦးဆုံးအချက် - ပစ္စည်း။ အလွန်ပစ္စည်းများ, ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်များ၏ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်နည်းပညာသစ်များ အသုံးပြု. ရသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယများအတွက်အတွင်းခံအဝတ်အစားရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဝါဂွမ်း။ ဆောငျးရာသီငါးဖမ်းအဖြစ်အိပ်ပျော်ခြင်းအဘို့, ချမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုမှာလမ်းလျှောက်, နေ့တိုင်း wear များအတွက်သုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏ပေးသောသဘာဝပစ္စည်း။ အဆိုပါပစ္စည်းကိုတည်ငြိမ်အပူလျှပ်ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအပြင်ပန်းကောင်းသောအစိုဓာတ်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရေချိုးခန်းလုံးဝစိုစွတ်သောရရှိသွားတဲ့လျှင်မည်သို့ပင်သည်, အစိုဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်အနီးကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဝါဂွမ်းအပူအတွင်းခံအဝတ်အစားအားကစားလေ့ကျင့်ရေးအဘို့အသင့်လျော်ဘူး။
သိုးမွှေး။ စျေးကြီးအတွင်းခံအဝတ်အစား merino သိုးမွှေး၏အခြေခံပေါ်မှာဖန်ဆင်းထားသည်, သင်မူကားပစ္စည်းကအခြားအမျိုးအစားများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သိုးမွှေးအပူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား, ဒါပေမယ့်လည်းပူနွေးလာမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်မသာ။ ရှည်လျားသောလူတန်းစားပေါင်းစုံနှင့်သူ၏အလုပ်အတွက်အိမ်ပြင်ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်သူများလူတို့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောသိုးမွှေးအတွင်းခံ။
ဒြပ်။ polypropylene နှင့် polyamide - ဒြပ်အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားများထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုနှစ်ခုအသုံးအများဆုံးပစ္စည်း။ လျင်မြန်စွာအနံ့ဝတ်ဆင်ယဉ်, သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်စောင့်ရှောက် crumple ပါဘူး, စုပြုံပါဘူး, အစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်။ အထူး antibacterial impregnation မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ polypropylene အားကစားအပူအတွင်းခံအဝတ်အစားများထုတ်လုပ်အသုံးပြုသည်ကပစ္စည်းအရေပြားခန်းခြောက်အဖြစ် (ထိုခန္ဓာကိုယ်မှတင်းကျပ်စွာနှင့်ယားယံစေနိုင်ပါတယ်), အထဲတွင်အိပ်ပျော်ခြင်းမှကဲ့သို့ပင်အချိန်ကြာမြင့်စွာဝတ်ဆင်မရနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရာသီဥတုလေ့ကျင့်ရေးအတှကျအကောငျးဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ တခါတရံမှာဒြပ်ပုကာကှယျဂုဏ်သတ္တိများတိုးတက်စေရန်သဘာဝကသိုးမွှေး "ရော" ။
ထိုအသေး: ဒြပ်သို့မဟုတ်သဘာဝအလျောက်ပစ္စည်းများ? သဘာဝထည်ဝတ်စုံ, သင့်ရည်မှန်းချက်ရှည်လျားသောလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်နိမ့်သောအပူချိန်မှာပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ပါလျှင်။ သဘာဝပစ္စည်းများသည်၎င်း၏အဓိကတာဝန်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ် - ပူနွေးလာရန်။ ချထားပေးရေ - သင့်ရည်မှန်းချက်ကိုတက်ကြွစွာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုလျှင်, သာဒြပ်အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။ ခန္ဓာကိုယ်ချွေးတသင်တန်းပေးစဉ်အတွင်းနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ် supercool စတင်ပါလိမ့်မယ်အရာကြွင်းလေစဉ်အတွင်းပိတ်မိနေပါလိမ့်မည်ဆိုပါက။
အဖြစ်အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိုင်သင့်သလဲ တင်းကျပ်စွာအဝတ်မကြိုက်ပါဘူးသူမည်သူမဆို, အခမဲ့အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားလုံးဝအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမပေးမညျဖွစျကွောငျးနားလည်သဘောပေါက်ရပါမယ်, ကာကှယျဂုဏ်သတ္တိများအောင်မြင်ထားတဲ့မှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်တစ်သျှူးများအကြားလေကြောင်းအလွှာသောကွောငျ့, ရိုးရှင်းသောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အလွန်မကြာခဏသင်အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားခြေအိတ်၏နိယာမကိုဖော်ပြထားတယ်ရသောတစ်ဦး "ဒုတိယအသားအရေ" ကဲ့သို့သောအယူအဆနှငျ့ရငျဆိုငျနိုငျသညျ။ ဒါဟာပိုမိုကြီးမားသည်ထက်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကိုဝယ်ခြင်းငှါ သာ. ကောင်း၏။ အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားအရေပြားနှင့်ထည်များအကြားကွာဟချက်ကိုရှောင်ရှား, တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ခန္ဓာကိုယ် fit သငျ့သညျ။
ဒါဟာတစ်သျှူး (- နွေရာသီအဘို့နှင့်ပျှမ်းမျှပူနွေး - ဆောင်းဦးနှင့်ဆောင်းတွင်းအလင်းနှင့် Ultra-ပေါ့ပါးထည်) ၏အထူအတွက်ကွဲပြားသောဆောငျးရာသီနဲ့နွေရာသီနှစ်မျိုးလုံးတစ်ပုံစံကိုရွေးချယ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။
အတွင်းခံထုတ်လုပ်ကြောင်းကုမ္ပဏီများ, အတော်လေးတွေအများကြီး, ဤနိုင်ငံနှင့်ပြည်ပမှာနှစ်ဦးစလုံး။ တစ်ဦးကောင်းဂုဏ်သတင်းရှိသည်သောအမှတ်တံဆိပ်, MJ အားကစား, Vaud, Marmot, Helly Hansen, ပြောင်းဆန်, LOWE Alpine, Craft များထဲတွင်။ ဤသည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီများစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပတ်သက်. , နှင့်လှုံ RedFox နှငျ့ကောငျးသော option ကိုဖြစ်လာသည်။
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ် မူတည်. အပူအတွင်းခံအဝတ်အစားများ၏ရွေးချယ်မှု: သင်မကြာခဏလမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်လျှင်, သင်၏ရွေးချယ်မှု - အပူအတွင်းခံအဝတ်အစား, သိုးမွှေးနှင့်ဝါဂွမ်း, သင်ထားတဲ့အားကစားသမားနေလျှင်, ဖြစ်နိုင်သည်မှာသဘာဝပိတ်ထည်များထို့အပြင်အတူဒြပ်အတွင်းခံအဝတ်အစားဝယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏, သင်နေ့စဉ် wear များအတွက်မော်ဒယ်ရချင်တယ်ဆိုရင် - သဘာဝက သင်ကူညီသိုးမွှေး။
မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်တော်မူအတွင်းခံ, အစိုဓာတ်ကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်လေတိုက်ခြင်းနှင့်အရေပြားစိတ်ဆိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါသာအနုတ်လက္ခဏာအပူအတွင်းခံ - Non-တက္ကသိုလ်, ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအဝတ်အစား၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားလိုအပ်အဖြစ်။ သင်တို့မူကားအများဆုံးမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုရသောအခြေအနေ defining အားဖြင့်, ဒီအားနည်းချက်ကတော့ဘာမျှမလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
အရေးကြီး! အဆိုပါအတွင်းခံမြင့်မားသောအပူချိန်သညျးမခံနိုငျကွောငျးကိုသတိရပါ, ဒါကြောင့် 40 ဒီဂရီထက်ပိုမိုမြင့်မားမအပူချိန်မှာဆေးကြောရနိုင်, မသွေ့ခြောက်သောသန့်စင်ခြင်းနှင့် ironed နိုင်ပါသည်။
ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ Adidas Neo ကို
အင်္ကျီကို Kira ကို Plastinina
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အပူအတွင်းခံ - ကိုလျှော်ဖို့ဘယ်လို, ဝတ်ဆင်ဖို့ရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုအမျိုးအစားများ,
Sciatica - ကုသမှု
Magnesia နှင့်အတူ Tyubazh
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ grommet အပေါ်ကုလားကာ
Zooey Deschanel နှစ်နှစ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပါသည်
Laguna Verde (ချီလီ),
အစိမ်းရောင်ပဲ - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး